NFT Megaways: Egwuregwu NFT nke mbụ kpaliri na-egosipụta CryptoPunks
E bipụtara na September 24, 2021
Mbido > Akụkọ & Edemede > NFT Megaways: Egwuregwu NFT nke mbụ kpaliri na-egosipụta CryptoPunks
Ndị na -emepụta ọdịnaya cha cha n'ịntanetị na -agabiga ma na -emepụta egwuregwu ga -enye ha ohere karịa ndị ahịa ha. Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ site na imepụta ihe ọhụrụ, n'ihi na ụdị usoro a ga -eweta nsonaazụ na -aga nke ọma. Egwuregwu Red Tiger nwere ahụmịhe ụlọ ọrụ buru ibu ma gosipụtala na ọ nwere ike nyefe egwuregwu oghere pụrụ iche. Mwepụta ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ egwuregwu mbụ ụdị ya nke ga -adọta uche n'ofe online ịgba chaa chaa ụlọ ọrụ na karịa.
Mwepụta ọhụrụ a bụ egwuregwu mbụ n'ụwa iji jikọta tokens na-abụghị nke a na-ejikọghị ọnụ (NFTs). Ndị na -egwu egwuregwu ga -enwekwa ohere ịnụ ụtọ CryptoPunks anọ, mkpụrụedemede pụrụ iche nke Larva Labs mepụtara. Ihe mkpokọta ndị a na -anọchite anya otu n'ime ụdị NFT mbụ wee zụta ya Evolution Otu tupu afọ a. Ha ga -agbakọ na mpịakọta iji bulie ụkpụrụ nke ihe nrite ego ma nyekwa ụgwọ dị egwu.
NFT Megaways bụ maka crypto revolution na memes ndị gbagoro n'ụzọ. A na-egwu oghere ahụ na eriri isii, ahịrị asaa, yana ụzọ ruru 200,704 iji merie. Na mgbakwunye na setịpụrụ nnukwu mpịgharị, enwere eriri ọzọ kwụ ọtọ akpọrọ Crypto Punks Bar, nke nwere akara anọ. N'ihe banyere onyonyo, NFT Megaways bụ ọkaibe 8-bit, na-ejikọ ụda azụ na isiokwu ọgbara ọhụrụ na ihe egwuregwu.
Na agbanyeghị na anyị amaghị ma ị ga -ahụ akụkụ ochie ma ọ bụ nke ọhụụ nke mgbakwunye na nso nso a Pọtụfoliyo Red Tiger, anyị nwere obi ike na ị ga -enwe ekele maka nnukwu oghere dị na oghere a. Usoro iwu RTP bụ 96%, nke na -ekwe nkwa inwe mmeri dị mma. A bịa na nhọrọ ịkụ nzọ, ndị egwuregwu ga -enwe ike itinye osisi ọ bụla sitere na $ 0.10 ruo $ 10 n'otu akpa.
Red Tiger weputara NFT Megaways ™, egwuregwu oghere mbụ NFT dabere na ụwa.
Ụkpụrụ Megaways ọkọlọtọ na -emetụta maka imepụta njikọta mmeri. Ọ pụtara na ị ga -etinyerịrị akara kwekọrọ na reel dị n'akụkụ, malite na aka ekpe. Akara ngosi dị ọnụ ala gụnyere akara cryptocurrency dị iche iche, dị ka Doge, Ethereum, Bitcoin na Litecoin. Ị ga -ahụkwa mem mem ndị ama ama, gụnyere Shiba Inu, Mona Lisa na ugogbe anya maka anwụ Thug Life, Larry the Bird, na diamond. hands akara.
Ndị na -egwu egwuregwu nwere ike irite uru site na njiri mara mma dị ka ndị na -amụba anụ ọhịa, mmeghachi olu na Crypto Spins. Onye na -ahụ maka mmeghachi omume yinye na -enye ohere ka ndị egwuregwu nwee mmeri karịa site na iwepu akara mmeri na reel na ịgbakwunye ndị ọhụrụ iji mejupụta ọnọdụ efu.
Anọ Crypto anọ ahụ anyị kpọtụrụ aha na mbụ bụ akara anụ ọhịa nke ga -apụta na Ogwe Crypto Punks, nke dị n'elu nnukwu okporo. Ha na-anọchi akara ngosi ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ ma na-anakọta Crypto Punks na-akwụ obere ego iji mụbaa otu onye maka nke ọ bụla ha na-anakọta.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na Crypto Punks jiri akara ise dị ọnụ ala wee nweta mmeri, ha ga-emepụta ọtụtụ 6x. Ọ bụrụ na mmeri gụnyere naanị akara na-akwụ ụgwọ dị elu, a ga-ebibi Crypto Pink na mmeghachi olu na-esote. Ebe ọ bụ na ihe ruru Crypto Punks abụọ nwere ike ịpụta na reel n'otu oge, ụkpụrụ ịba ụba enweghị ike karịa 30x. Mgbe abụọ Crypto Punks sonyere na mmeri, ụkpụrụ ha na -aba ụba.
Ịda akara atọ ma ọ bụ karịa Crypto Spin akara na mpịgharị ga -ebute okirikiri ego, ebe ndị egwuregwu na -enweta ihe ruru 25 spins. Anụ Crypto Punk anọ na -atụgharị n'ime mita anọ n'oge okirikiri, na oge ọ bụla Crypto Punks na -emepụta ọtụtụ, ha ga -anọgide na -arụ ọrụ ruo mgbe ngwụcha okirikiri ahụ. Dịka n'egwuregwu bọọlụ, uru bara ụba kacha elu bụ 30x. Nchụsasị ga -aga n'ihu na -apụta na reel, yana atọ, anọ, ise ma ọ bụ isii n'ime ha gbakwunyere ise, iri, iri na ise ma ọ bụ iri abụọ ka a gụpụtara.
Okpu okpu na Red Tiger maka iche echiche n'èzí igbe mgbe ị na -arụ ọrụ na egwuregwu a. Onye nrụpụta ahụ jikọtara ọtụtụ isiokwu na-ekpo ọkụ nke ọma, tinye ha na ngwugwu retro mara mma, gbakwunye mmetụ ọgbara ọhụrụ wee wepụta mwepụta na-atọ ụtọ. Crypto Punks bụ mgbakwunye dị mma ma nwee nnukwu ego na egwuregwu egwuregwu, na -enye ndị egwuregwu ohere ikwu nnukwu ụgwọ. Onye na-ahụ maka ụgbọ elu Megaways na-emechi onyinye ahụ, anyị nwekwara obi ike na ndị egwuregwu ga-ahụ aha 8-bit a n'anya.
N'ebe a ị nwere ike igwu oghere vidiyo NFT Megaways